Tag: isdhexgalka macaamiisha | Martech Zone
Tag: macaamilka macaamiisha
Si kasta oo ay tahay warshadaha aad ku jirto, haddii ganacsigaagu ku jiro qaybta B2C, fursadaha aad ayey u fiican yihiin inaad la kulanto tartan xoog leh - gaar ahaan haddii aad tahay dukaan leben & madaafiic ah. Ka dib oo dhan, waad ogtahay inta iyo inta jeer ee macaamiisha ay wax ku iibsadaan internetka maalmahan. Dadku wali waxay aadayaan dukaamada lebenka & hoobiyeyaasha; laakiin ku habboonaanta wax ka iibsashada khadka tooska ah ayaa ka dhigtay tirada macaamiisha dukaanka ku jirta inay hoos u dhacaan. Mid ka mid ah siyaabaha ganacsigu u yahay
Waxa jira saddex nooc oo aasaasi ah oo ay ururadu u daabacaan shirkaddooda: Buug-yaraha - degel degsan oo si fudud u soo bandhigta booqdayaasha si ay u hubiyaan. Dynamic - goob si joogto ah loo cusbooneysiiyo oo bixisa wararka, cusbooneysiinta, iyo warbaahinta kale. Interactive - waa goob bixisa booqdaha si uu ula socdo oo ula falgalo sida ay rabaan. Tusaalooyinka isdhexgalka ee aan u sameynay macaamiisha ayaa waxaa ka mid ahaa istiraatiijiyad is dhexgal ah, ku soo noqoshada maalgashiga ama xisaabinta qiimaha, khariidadaha is dhexgalka,